Iwekota Shopify Seamlessly na gị WordPress Site | Martech Zone
Anyị anọwo na-edozi saịtị ole na ole Woocommerce maka ndị ahịa… ọ dịkwabeghị mfe. Woocommerce interface dị ntakịrị ma atụmatụ ndị ọzọ dịkarị site na plethora nke plugins chọrọ ndenye aha ụgwọ… na nhazi. Ọtụtụ na nhazi ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ị hụtụbeghị Shopify, anyị kesara vidiyo na-egosi gị otu esi melite ebe nrụọrụ weebụ gị niile n'okpuru 25 nkeji! Shopify arụsi ọrụ ike n'ezie iji nye mmekọrịta enyi na enyi maka ndị na-abụghị web-savvy ịmalite saịtị ha wee bido ahịa n'ịntanetị.
Ghọta na e nwere ihe karịrị nde 60 saịtị wuru na WordPress bụ ihe a na-apụghị ileghara anya. Shopify anaghịzi eleghara ya anya - ha wepụtara ma isiokwu na ngwa mgbakwunye dị mfe iwekota gi Shopify saịtị seamlessly na WordPress.
Ọ bụrụ na inweela nnukwu saịtị ma ị na-achọ ijikọ bọtịnụ ngwaahịa iji tinye ihe na ụgbọ ibu azụmahịa, Shopify ewepụtala ngwa mgbakwunye na-arụ ọrụ na saịtị ma ọ bụ isiokwu ọ bụla.
Ihe mgbakwunye WordPress na-enye ndị nchịkwa nke saịtị ahụ ohere iji dobe ngwaahịa na bọtịnụ ịzụta n'ime ihe ọ bụla, ibe ma ọ bụ post blog. Mgbe onye ọbịa bịara pịa bọtịnụ ahụ, ụgbọ ibu azụmahịa na-apụ apụ maka saịtị gị ga-apụta, ọbụnakwa na-enye ndị ahịa ohere ịzụta ọtụtụ ngwaahịa ozugbo.
Budata ngwa mgbakwunye
Tags: ụlọ ahịashopify bọtịnụshopify gburugburuWordPressntinye ecommerce WordPresswordpress mwekota
Mee 5, 2016 na 12: 56 PM
Zụọ ahịa ọ dị mma. M nwalere n'otu n'ime saịtị m ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Daalụ!